Ma duufaanno ayaa ka dhici kara Spain? | Saadaasha Shabakadda
Ma duufaanno ayaa ka dhici kara Spain?
Haddii aad jeceshahay duufaannada, hubaal waxaad dooneysaa mid ka sameysma Spain, sax? Waana marka aad ogtahay in gudaha Mareykanka qiyaastii 1000 ka mid ah duufaanadan cajiibka ah la sameeyo sanad walba, waxay kaa dhigeysaa inaad rabto inaad tikit diyaaradeed ka iibsato El Corredor de los Tornados kaliya si aad uga fikirto, xitaa hal mar.
Laakiin, inkasta oo waddankeenna aysan ka jirin xaaladaha ugu habboon ee lagu arko EF5, haa waxaad ku arki kartaa duufaano Isbaanish ah. Maxaa adag in la ogaado meesha iyo goorta.
Hadana waxa weeye, ifafaalahan ayaa dhici kara wakhti kasta oo sanadka ka mid ah, sidoo kale waxay dhici karaan labada maalin iyo habeenba; taasi waa in la yiraahdo, mid ayaa naga yaabin kara waqti kasta. Dabcan, sida laga soo xigtay xogta ka AEMET, Isbaanishka waxay ku soo noqnoqdaan inta u dhexeysa bilaha Sebtember ilaa Disembar, iyo saacadaha galabtii.
Dalkeena, way ku adagtahay tornaadooyinka inay ka sameystaan ​​Mareykanka. Xaqiiqdii, ilaa taariikhda kaliya kuwa u dhexeeya EF0 iyo EF3 meelo kala duwan oo ku yaal qeybta hoose ee jasiiradda, iyo bariga dalka oo ay ku jiraan Jasiiradaha Balearic.
Duufaano taariikhi ah oo ka dhaca Spain
Duufaannada ugu muhiimsan ee lagu arkay dhulka Isbaanishka waxay ahaayeen kuwo ka kooban EF3, waxayna ka dhaceen goobahan:
Cádiz, sanadkii 1671
Madrid, sanadkii 1886
Ciutadella-Ferreries (Jasiiradaha Balearic), sanadkii 1992
Navaleno-San Leonardo de Yagüe (Soria) sanadkii 1999
Dabaylaha duufaanta EF3 waxay ku dhacdaa xawaare u dhexeeya 219 iyo 266km / saacaddii, iyo waxay sababi kartaa dhaawac culus. Waxay rogi kartaa tareenada, waxay qaadi kartaa gawaarida culus waxayna ku tuuri kartaa meel fog, waxay burburin kartaa dhismayaasha leh aasaas daciif ah, sidoo kale waxay ka tagi kartaa dhimasho.
Marka, haddii aan dooneyno inaan aragno mid, waa inay ahaataa masaafo gaar ah - hadba waa sii wanaagsanaataa - maxaa yeelay haddii aynaan sameynin waxaan la kulmi karnaa dhibaatooyin badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Ma duufaanno ayaa ka dhici kara Spain?
Muxuu ahaa hillaaca hillaaca ugu dheer uguna dhaadheer taariikhda?